Raysul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray Kismaayo. - Wargeyska Faafiye
Raysul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray Kismaayo.
Raysul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubba, Axmed Maxamed Islaan iyo xubno ka tirsan maamulkiisa ayaa raysul wasaaraha ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo.
Raysul wasaaraha oo socdaalkiisa ku wehliyaan wasiir ku-xigeenno iyo xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, uu ka sheegay shir jaraaid oo uu Kismaayo ku qabtay, in uu kala hadli doono maamulka Jubba horumarinta adeegyada bulshada iyo ammaanka gobollada Jubbooyinka.
Madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Madoobe, ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin booqashada raysul wasaaraha, isla markaana ay u gudbin doonaan xaaladda ka jirta deegaannada maamulka Jubba hoos-taga.
Waa booqashadii ugu horreysay ee raysul wasaare Cabdiweli Sheekh uu ku tego magaalada Kismaayo oo uu joogi doono seddexda maalin ee soo socota.
Booqashadiisa Kismaayo ayaa la sheegay inay qeyb ka tahay socdaallo uu maalmahan ku marayay qeybo ka tirsan gobollada dalka, isagoo horey u booqday magaalooyinka Jowhar iyo Buulo-burte.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsThe softer side of Osama bin Laden.Britain oo caawineysa qaxootiga Suuriya.Muslim who hid kosher market customers to become French citizenShiinaha oo ogolaaday laba carruur.Raaskambooni oo ku wajahan Afmadow.